Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kulamo la qaatay mas’uuliyiinta Belgium iyo ACP | Anti-Tribalism
Khilaaf Hoose oo la Sheegey in uu Dhaxeeyo Madaxweyne Shiikh Shariif iyo Raiisul Wasaare Cabdiweli M. Cali Gaas →
Brussels – GMN – Ra’iisal-Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxaa booqasho rasmi ah oo labo cisho ah uga bilaabaneysaa Magaalada Brussels ee dalka Belgium oo xarun u ah Midowga Yurub (EU). Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof. Abdiweli Mohamed Ali Gas ayaa casuumad rasmi ah ka helay Madaxda Midowga Yurub oo uu kala hadli doono arrimaha Soomaaliya, horumarka baaxadda leh ee laga sameeyey dhanka Roadmap-ka iyo shirarkii Garowe oo dhammaan ku dhammaaday guul, horseedna u noqday in Soomaalidu ay dhexdooda ka heshiin karaan, iskuna afgaran karaan arrimaha Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa kulamo la qaadan doono madaxda Midowga Yurub oo uu ku jiro Madaxweynaha Midowga Yurub Barosso iyo madax kale. Sidoo kale Ra’iisal-Wasaarahu waxuu kulamo la qaadan doonaa Golaha Ammaanka ee Midowga Yurub iyo Madaxda dalka Belgium.
Sidoo kale Ra’iisul-Wasaare Abdiweli Mohamed Ali waxuu la kulmi doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee Belgium si uu ugala hadlo horumarka ballaaran ee dowladdu ka sameysey dhanka amniga, xiriirka maamulada, dib-u-heshiisiinta, dhameystirka dastuurka, dib-u-habeynta baarlamaanka iyo shirka London ka dhici doono 23-ka bishan ayn ku jirno ee February.
Cabdi wali Gaas oo kulamo la qaatay jaaliyada Somalida Belgium”Madax Kale”Sawiro”
DAAWO SAWIRADA:-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Prof Abdiweli Mohamed Ali oo booqasho rasmi ah ku jooga Brussels si uu kulamo ula qaato mas’uuliyiinta Midowga Yurub ayaa Isniintii kulamo kala duwan la qaatay ma’uuliyiin ka tirsan dalka Belgium, Kooxda Caalamiga ah ee Africa, Caribbean iyo Pacific (ACP) isla markaana kormeer ku tagey Safaarada Soomaalida ee Belgium iyo Hoyga Safaaradda.
Ra’iisul Wasaare Abdiweli ayaa kulan si heer sare ah loo soo agaasimay la yeeshay Guddiga Safiirada ee dalalka Africa, Caribbean iyo Pacific oo ku mideysan ururka caalamiga ah ee ACP.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa halkaas ka jeediyey khudbad taariikhi ah oo uu warbixin ka siiyey safiirada ACP xaaladda dalku marayo, horumarka Dowladdu ka sameysey dhinacyo fara badan sida amniga, dastuurka, dib-u-heshiisiinta & xiriirka maamulada, arrimaha gar-gaarka bani’aadanimo iyo maamul wanaaga.
Ra’iisul Wasaarahu waxuu sheegay in Somalia ay ka mid aheyd aasaasayaashii ACP, haddana la rajeynayo in Soomaaliya ay doorkii saliimka ahaa ee ay ku laheyd ACP dhowaan ka qeyb qaadan doonto.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale kulan la yeesho Jaaliyadda Soomaalida waxaa uu uga warbixiyay xaalada uu dalku marayo iyo wax yaabihii kasoo baxay shirkii Garoowe wxaana ay jaaliyada oo hool weyn isugu timid ay su,aalo weydiin reysul wasaaraha.